कांग्रेस महाधिवेशनको मुखैमा देउवा यस्तो मुडमा देखिनुको रहस्य के हो ? — Imandarmedia.com
कांग्रेस महाधिवेशनको मुखैमा देउवा यस्तो मुडमा देखिनुको रहस्य के हो ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा यतिबेला महाधिवेशनको माहोल तातेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमते रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि महाधिवेशनबाट समापति चुनिन आंकाक्षी देखिन्छन् । यसैबीचमा देउवापत्नी आरजु राणा देउवाले आज अर्थपूर्णरूपमा एउटा पारिवारिक तस्वीर सार्वजनिक गरेकी छन् ।
फेसबुकमा आरजुले राखेको तस्वीरमा देउवा दम्पतीका साथ छोरा जयवीरसिंह पनि छन् । अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा खासै नदेखिएका जयवीरसिंह देउवा दम्पतीका एक्ला सन्तान हुन् । तस्वीर कुनै धार्मिक समारोहमा खिचिएको जस्तो देखिन्छ । देउवा र उनका छोराले राधेराधे लेखिएको खादा लगाएका छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा धर्म पनि एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डा हुने गर्छ । कांग्रेसभित्र नेपाल हिन्दू राज्यमा फर्किनुपर्छ भन्ने मत निकै बलियो छ । सोही मत आकर्षित गर्नका लागि आरजुले यो तस्वीर सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने बुझाइ कतिपयको छ ।